နေလင်းအောင်: သမ္မာကျမ်းစာနှင့် မီးသွေးခြင်းတောင်း
ဒီပုံပြင်ကိုတော့ အရှေ့ပိုင်း ကင်တက်ကီ တောင်တန်းဒေသရှိ လယ်ယာမြေတစ်ခုမှာ မြေးယောက်ျားလေးနှင့်အတူ နေထိုင်နေတဲ့ အဘိုးအိုတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အဘိုးအိုဟာ နံနက်တိုင်း စောစောထပြီး မီးဖိုချောင် စားပွဲမှာထိုင်ကာ သူရဲ့ ဟောင်းနွမ်းစုတ်ပြဲနေတဲ့ သမ္မာကျမ်းစာအုပ်ကို ဖတ်လေ့ရှိပါတယ်။ အဘိုးလို ဖြစ်ချင်နေတဲ့ သူ့မြေးဟာ အဘိုးလုပ်သမျှ တတ်နိုင်သလောက် လိုက်လံတုပဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါတယ်။
တစ်နေ့မှာတော့ မြေးက ပြောလာပါတယ်။ “အဘိုးရေ…ကျွန်တော်လည်း အဘိုးလိုပဲ သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် နားမလည်ဘူးဗျာ။ ကျွန်တော် နားလည်ထားတာကတော့ စာအုပ်ကို ပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် ချက်ချင်းမေ့သွားတယ် ဆိုတာပါပဲ။ သမ္မာကျမ်းစာကိုဖတ်ရင် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်သလဲဗျ” အဘိုးအိုဟာ မီးဖိုထဲ မီးသွေးတွေ ထည့်နေရင်းမှ လှည့်ကြည့်ကာ အေးဆေးစွာ ပြောလိုက်ပါတယ်။ “ဒီ မီးသွေးခြင်းတောင်းကို ယူရင်း မြစ်ဆီသွားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ရေတစ်ခြင်း ထည့်ယူလာခဲ့ပါ။”
လူကလေးက ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ အိမ်ပြန်မရောက်မီ ရေတွေအားလုံး စိမ့်ထွက်ကျကုန်တယ်။ အဘိုးက ရယ်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ “နောက်တစ်ကြိမ်ဆို ငါ့မြေး ပိုပြီး မြန်မြန် ပြေးလာရလိမ့်မယ်။” အဲဒီနောက် အဘိုးဟာ မြေးကို မြစ်ဆီသွားပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ရေထည့်လာဖို့ စေခိုင်းလိုက်ပြန်တယ်။ ဒီအကြိမ်မှာတော့ လူငယ်လေးဟာ ပိုပြီးမြန်အောင် ပြေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မီးသွေးခြင်းတောင်းကတော့ အိမ်မရောက်မီမှာပင် ရေတွေ ကုန်သွားပြန်တယ်။ သူဟာ ဟောဟဲလိုက်ရင်း ခြင်းတောင်းတစ်လုံးနဲ့ ရေခပ်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ အဘိုးကို ပြောလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ရေဆွဲပုံးတစ်လုံးရှာဖို့ ထွက်သွားပါတယ်။ အဘိုးက ပြောပါတယ်။ “အဘိုး ရေဆွဲပုံးနဲ့ရေကို မလိုချင်ဘူး။ ဝါးခြင်းတောင်းနဲ့ရေကိုသာ လိုချင်တာပါ။ ငါ့မြေး လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ငါ့မြေးဟာ ကောင်းမွန်လုံလောက်စွာ ကြိုးစားအားထုတ်မှု မရှိခဲ့လို့ပါ။” အဲဒီနောက် အဘိုးဟာ သူ့မြေး နောက်တစ်ကြိမ် ကြိုးစားတာကို စောင့်ကြည့်ဖို့ တံခါးအပြင် ထွက်လိုက်ပါတယ်။
မြေးက ဒီတစ်ကြိမ်မှာလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သိနားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ ဘယ်လောက်ပဲ ခပ်မြန်မြန်ပြေးပါစေ၊ အဝေးကြီးမရောက်မီ ရေတွေအားလုံး စိမ့်ထွက်ကျကုန်လိမ့်မယ်ဆိုတာ အဘိုးဖြစ်သူကို ပြသချင်ခဲ့တယ်။ မြေးဟာ ရေထည့်ကာ ခပ်မြန်မြန် ပြေးလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဘိုးဆီ သူ ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ခြင်းတောင်းထဲ ရေမကျန်တော့ပါဘူး။ သူဟာ မောပန်းစွာနဲ့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ “ဒါဟာ အချည်းနှီးပဲဆိုတာ အဘိုး တွေ့တယ်မို့လား။” အဘိုးအိုက ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ “ခြင်းတောင်းကို ကြည့်လိုက်စမ်းပါ”
မြေးက ခြင်းတောင်းကို ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ခြင်းတောင်းဟာ ယခင်နဲ့ မတူတော့တာကို ပထမဆုံးအကြိမ် သူ သတိပြုမိလိုက်ပါတယ်။ ညစ်ပတ်နေတဲ့ မီးသွေးခြင်းတောင်း မဟုတ်တော့ဘဲ သန့်ရှင်းနေတဲ့ ခြင်းတောင်းဖြစ်သွားပါပြီ။
“မြေးရေ…သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်တဲ့အခါ အဲဒီလို ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲပါတဲ့ စာသားအားလုံးကိုတော့ ငါ့မြေး နားလည်ချင်မှ နားလည်မှာပါ။ အားလုံး မှတ်မိချင်မှလည်း မှတ်မိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ငါ့မြေး ဖတ်လိုက်တဲ့အခါ သမ္မာကျမ်းစာက ငါ့မြေးရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို စတင်ပြောင်းလဲ ပေးပါလိမ့်မယ်။”
မီးသွေးခြင်းတောင်းက ပေးသော သင်ခန်းစာ
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဘုရားသခင်ရဲ့စကား တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလောက်ဖတ်ဖို့ အချိန်ပေးကြည့်ပါ။ သင်ဟာ ဖတ်ထားသမျှ အများကြီး သတိရှိရှိနဲ့ မလိုက်နာနိုင်သေးလျှင်ပင် ကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေ သင့်အပေါ် သက်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အနေနဲ့ကတော့ ဗုဒ္ဓစကား နေ့တိုင်းကြားနာ၊ ဖတ်ရူ့ကြည့်ရပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ဗုဒ္ဓစကားကို အားလုံးနားလည်ချင်မှ နားလည်မှာပါ။ နားလည်ထားသလောက် လက်တွေ့ကျကျ စတင်ကျင့်ကြံ လိုက်နာမည်ဆိုလျှင် ညစ်နွမ်းခက်ထန်နေတဲ့ စိတ်သဘောထားတွေ တဖြည်းဖြည်း ပျော့ပျောင်း ပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
စိတ်ကသာ အရာရာ ဦးဆောင်ပါတယ်။ ကုသိုလ်ရေးနဲ့ စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ် မွေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ စိတ်ထဲမှာ ဗုဒ္ဓစကားတွေ ရှိနေမှသာ ဖြစ်နိုင်မှာပါ။ လက်တွေ့ကျကျ ကျင့်ကြံနိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့ တရားစကားတွေ တတ်နိုင်သလောက် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်သာ စတင်နိုင်ပါတယ်။
Ref; The Bible and the Old Wicker Coal Basket by Unknown Author
One day the grandson asked, "Papa, I try to read the Bible just like you but I don’t understand it, and what I do understand I forget as soon as I close the book. What good does reading the Bible do?" The Grandfather quietly turned from putting coal in the stove and said, "Take this old wicker coal basket down to the river and bring backabasket of water."
At this point, the boy knew it was impossible, but he wanted to show his grandfather that even if he ran as fast as he could, the water would leak out before he got far at all. The boy scooped the water and ran hard, but when he reached his grandfather the basket was again empty. Out of breath, he said, "See Papa, it’s useless!" "So you think it is useless?" The old man said, "Look at the basket."
Take time to readaportion of God’s word each day; it will affect you for good even if you don’t consciously retain much of what you have read.
Posted by နေလင်းအောင် at 6:24 PM